Semalt: Ngwaọrụ kachasị ike SEO maka azụmahịa
Asọmpi n’ahịa e-commerce na-akawanye njọ, ọbụnakwa ụlọ ọrụ kachasị ike kwesịrị, site n’oge ruo n’oge, nyochaa ihe ndị ama ama ha na ntanetị.
N'ihi ya, enwere ọtụtụ nhọrọ maka ndị ọkachamara na-agba ọsọ weebụsaịtị maka ụlọ ọrụ nnukwu, yana maka ndị na-ede blọgụ novice ndị na-amalite na-adọta ndị na-agụ akwụkwọ ọhụrụ.
Ma ịbula ọkachamara ma ọ bụ ọbụna onye mbido, ndị asọmpi gị agaghị eche. Ya mere, buru onye mbu iji meziwanye onodu gi na Intanet: SEO di nkpa diri gi!
N'ezie, SEO bụ usoro mgbagwoju anya nke chọrọ iji ngwaọrụ ndị ọzọ. N'ime afọ ole na ole gara aga, Semalt etinyela ngwaọrụ nyocha kachasị mma iji zụlite atụmatụ SEO dị mkpa maka ụlọ ọrụ gị. Ihe ọdịnihu dị nso. Ya mere, gbaa mbọ hụ na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere nnukwu ọnọdụ na ya taa.
Chọpụta ebe a ngwa ọrụ Semalt kachasị dị mkpa na usoro ga-enyere gị aka ịkwalite weebụsaịtị gị na ọdụ ọchụchọ kachasị elu: SERP - CONTENT - GOOGLE WEBMASTERS - PAGE SPEED
Ihu akwukwo nke Search Ngini
Ngalaba SERP gụnyere ngwaọrụ maka nyocha weebụsaịtị. Chọpụta okwu ndị dị na ebe nrụọrụ weebụ gị dị, chọta peeji ndị na-anya okporo ụzọ gị, wee chọpụta ọnọdụ ha na nsonaazụ ọchụchọ organic. Choo ndi metere aka n’uzo iji wulite usoro iji bulie elu.
Keywords na TOP
Nkwupụta a na-egosi isiokwu niile nke mkpokọta weebụ gị dị na nsonaazụ ọchụchọ ọchụchọ nke organic, ibe dị iche iche, na ọnọdụ SERP ha maka otu isiokwu.
Gụnye mpaghara ngalaba: ị nwere ike nyochaa ngalaba gị na ngalaba sub ma ọ bụ wezuga ha iji nweta data maka naanị ngalaba ngalaba.
Nchọta nchọta: Ndị a bụ igwe nchọta nchọta echebarala weebụsaịtị gị ma ọ dịkarịa ala otu okwu. Edepụtara ndenye aha na-agbadata usoro nke ọnụ ọgụgụ Keywords.
Nsonaazụ gosiri gị:
Ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụokwu dị na TOP: Na ngalaba a, ị ga-enwe eserese nke na-egosi ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụokwu na TOP n'oge oge. Ọ na - enyere gị aka lelee mgbanwe dị na ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụokwu ntanetị nke saịtị wee nweta na Google TOP 1-100 results ọchụchọ.
Nkesa Keywords site na TOP: Lee, ị nwere ike ịchọta ọnụọgụ nke akara okwu weebụsaịtị wepụtara na Google TOP -1-100 nsonaazụ ọchụchọ dị iche iche, na-emegide ụbọchị gara aga.
Kinglee akara site na mkpụrụokwu: nke a bụ okpokoro gosipụtara isiokwu ndị kachasị ewu ewu na ibe saịtị wepụtara maka nsonaazụ ọchụchọ ọchụchọ organic. Nwere ike ịchọta ọnọdụ SERP ha maka ụbọchị ahọpụtara na otu ha siri gbanwee, dị iche na oge gara aga.
Nwere ike inyocha data ahụ na tebụl ahụ site n'usoro dị iche iche:
Isi okwu ma ọ bụ akụkụ ya
URL ma ọ bụ akụkụ ya
Iji maa atụ, inwere ike ihichapu peeji niile ga - edoba maka isi okwu nwere okwu ‘‘ zụta ’’ ma nwee ọnọdụ TOP-1 na nsonaazụ nchọta.
Tebụl a gosikwara gị:
Keywords nke otu weebụsaịtị mebere na nsonaazụ ọchụchọ nke organic
URL nke ibe weebụ gị na ọkwa ọrụ ha maka otu isi okwu.
Ọnọdụ ihu akwụkwọ web dị na Google TOP maka isi okwu e mere maka ụbọchị ahụ akọwapụtara.
Onu ogugu ndi mmadu choro ighota okwu banyere ihe ochicho Google.
Peeji kachasị mma
Na ngalaba a, ị ga - ahụ peeji ndị na - ebugharị akụkụ kachasị elu nke organic na ebe nrụọrụ weebụ gị. Lezienụ anya na ha: dozie njehie ha dị na peeji nke SEO, gbakwunye ọdịnaya pụrụ iche, ma kwalite ibe ndị a iji nwetakwu okporo ụzọ na ọchụchọ Google. N'ime nke a, nsonaazụ ga - egosi gị:
Peeji kachasị mma na oge na-aga: ị ga-enweta eserese na-egosi mgbanwe nke ọnụọgụ saịtị weebụ na Google TOP maka usoro ndụ niile nke ọrụ ahụ. Mgbe ahụ Site na ịgbanye ogo, ịnwere ike ịlele data maka otu izu ma ọ bụ ọnwa.
Ọdịiche: ebe a, ị nwere ike ịchọta ọnụọgụ nke ibe weebụ dị na Google TOP 1-100 nsonaazụ ọchụchọ ebumpụta ụwa, na-emegide ụbọchị gara aga.
Stats keywords stats stats: ebe a, eserese ahu gosiputara mgbanwe nke onu ogugu nke igodo ndi edeputara na Google na TOP dum usoro oru ngo a.
Na ngalaba a, ị ga-ahụ weebụsaịtị niile nke nwere ọkwa Google TOP 1-100 maka mkpụrụedemede yiri nke ndị weebụsaịtị gị nwere. Chọpụta ọnọdụ ebe nrụọrụ weebụ gị nwere n'etiti ndị asọmpi gị site na ọnụ ọgụgụ nke igodo niile na TOP-100
Mụta ma ọ bụrụ na Google na-emeso webpage gị dịka isi mmalite pụrụ iche ma ọ bụ. N'ebe a, ị ga - enwe ike ịlele pasent ziri ezi nke ọdịnaya gị, chọpụta ihe akụkụ nke ederede, ma lelee anya na isi mmalite.
Ibe akwukwo di iche
Chọpụta ma Google na-emeso ntanetị weebụ gị dịka nke pụrụ iche ma ọ bụ na ọ bụghị. Agbanyeghị na ị ji n’aka na ihe dị n’ime gị enweghị atụ, ọ nwere ike bụrụ onye ọzọ depụtaghachiri ya. Ọ bụrụ n’edemede ụfọdụ websaịtị ndị ọzọ nwere ọdịnaya gị ngwa ngwa karịa nke gị, Google ga-ele ya anya dị ka isi mmalite nke ọdịnaya, ebe a ga - akpọ ibe weebụ gị akara Buru n’uche na ọnụọgụ websaịtị dị elu nwere ike bute ntaramahụhụ Google.
Ebumnuche bụ isi na ntinye akwụkwọ pụrụ iche
Ebumnuche ebumnuche ọrụ ịlele ibe bụ ịchọpụta ọdịnaya nke ndị asọmpi zuru, nke onye na-ede akwụkwọ nwere ike ịga, saịtị gị ga-abụ naanị ọnụọgụ abụọ ma ghara ibuli ọkwá dị elu.
Nyochaa na - ewere ọnọdụ na obere usoro atọ. Nke mbu, ị na-egosi adreesị nke saịtị ahụ, na ngalaba URL, mgbe ahụ ị na-egosi ma ịchọrọ ime nyocha gị na mba (google.com (All) - International) ma ọ bụ naanị na web French (google.fr (French)) - France), ugbu a ị na-ebido nyocha ahụ site na ịpị bọtịnụ Lelee. Anyị ga-enyocha ya ma gosipụta ngalaba niile.
Mgbe ahụ, ị nwere ike ịlele akụkụ ọ bụla na otu pịa!
81-100% ịpụ iche
Igwe nchọta ahụ na-ahụkarị ibe a pụrụ iche. Ọnọdụ webpage ahụ nwere ike itolite na-enweghị nsogbu na SERP.
51-80% ịpụ iche
Nchọpụta nchọcha akachasị achọ ihe dị na peeji a ka ịdezigharị ya. Ọnọdụ webụsaịtị nwere ike itolite ma ọ bụ, opekata mpe, agaghị emebi. Iji kwalite webpage gị, mepụta ọdịnaya pụrụ iche na nke bara uru karị.
0-50% ịpụ iche
Nchọpụta nchọcha a na-ahụkarị na ọdịnaya dị na peeji a dị ka plagiarism. Uto onodu eleghi anya. Shouldkwesịrị iji ihe pụrụ iche dochie ọdịnaya gị ugbu a.
Mgbe emechara akụkụ ahụ niile, ị nwekwara ike ịhụ na nsonaazụ gị abụọ bụ isi:
Ọdịnaya: N'ebe a, ị nwere ike ịchọta ọdịnaya ederede niile nke Googlebot na-ahụ na websaịtị enyere. Mpempe akwụkwọ ndị mejupụtara ọdịnaya ahụ na-akọwapụta.
Isi mmalite nke ọdịnaya: Ebe a, websaịtị Google na-emeso dị ka isi mmalite nke ọdịnaya enyere ka edepụtara na tebụl a. Mgbe ahụ, ị nwere ike ịlele akụkụ nke ọdịnaya a na-ahụ na weebụsaịtị ọ bụla.
Rịba ama na ị nwere ike izute ndị otu Semalt maka ajụjụ ọ bụla gbasara azịza maka ịpụ iche nke weebụsaịtị gị.
Jikwaa ọtụtụ weebụsaịtị iji njirimara anyị. Nyefee ngalaba gị ma ọ bụ URLs kachasị na Google ma jiri nwayọ soro usoro ha gosipụtara. Gbaa mbọ mepụta akaụntụ Google ka ịbanye na ngalaba Google Webmasters.
Webmaster Google bụ ọrụ na-egosi otú weebụsaịtị gị si apụta na nsonaazụ ọchụchọ Google ma na-enyere gị aka ịchọpụta nsogbu ndepụtara. Na webụsaịtị a, ịnwere ike itinye websaịtị gị na webmaịlụ gị niile ka jụọ ajụjụ Google.
Ngwongwo nwere: Choputa nsonaazụ site na URL ma ọ bụ akụkụ ya. Can nwere ike ịchọta URL ndị nwere ma ọ bụ enweghị otu okwu akọwapụtara yana otu URL dakọtara.
Ricskpụrụ ndị a na-egosi otu esi rụọ ọrụ weebụsaịtị gị. Nwere ike ịlele ha maka ụbọchị / oge akọwapụtara ma tulee data ahụ. Ọrụ a na-enyere aka ịchọpụta ike weebụsaịtị gị na njehie ndị na-egbochi ya ịhọrọ ya na TOP 1
N’ime ngọngọ a, ịnwere ike iwebata websaịtị gị na Google ka ị hụ ebe edepụtara saịtị na kedu ndị nwere ụfọdụ mmejọ. Họrọ ngalaba ilele ndepụta nke saịtịmaps.
Lelee ma ọ bụrụ na ibu nke websaịtị gị ezuru ihe ndị Google chọrọ. N'ebe a, ị ga-enye gị ozi gbasara mmejọ ndị dị adị nke ekwesịrị idozi yana ndụmọdụ maka otu esi emezi arụmọrụ saịtị gị.
Kedu ihe kpatara ọsọ saịtị dị?
Ọsọ nke websaịtị bu ibu dị elu. Ogologo oge itinye ihe na-adighi nma na-emetuta onodu ya na nsonaazụ ya. Yandex na Google na-ahọrọ ngwa ngwa ngwa ngwa.
Oge kachasị mma itinye ego bụ sekọnd 2-3. Ezigbo - oge nzaghachi onye ọrụ bụ sekọnd 0,5.
Taa, ọtụtụ ndị na-ege ntị n'ịntanetị na-eji ngwaọrụ mkpanaka gaa na saịtị. Ha nwere ọtụtụ ụzọ ngwa ngwa ga-enweta ọfụma na akụrụngwa nke ime karịa kọmputa nkeonwe.
Onye ọ bụla maara na saịtị na-adịghị ngwa adịghị mma. Ọ bụrụ na saịtị ahụ na-akwụsịlata oge, ndị ọbịa nwere nnukwu nsogbu idozi ọrụ ha, na nke ahụ, ọ bụ naanị ihe iwe.
Mana ọ bụrụgodi na ọnọdụ ahụ site na ntanetị weebụ bụ ihe dịkarịsịrị ala, igbu oge ntakịrị na igosipụta saịtị ahụ na-ebute mfu ndị na-ege ntị na ọnụego ntụgharị.
Ndị ọkachamara nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị achọpụtala na mgbe nbudata ọsọ ọsọ na-agbada site na 100 ms, ahịa ha na-agbada ozugbo 1%.
Ya mere, nsogbu nke ọsọ ọsọ saịtị kwesịrị idozi ozugbo n'ọtụtụ ụzọ.
Na ezigbo ebumnuche, Semalt ewepụtala ngwa nyocha ihe ọsọ ọsọ peeji a iji nyochaa paramita niile enwere ike gbasara ọsọ nke saịtị na ibe akọwapụtara: Chọpụta otu esi arụ ọrụ.
Ihe nyocha ngwa ngwa peeji
A na-eji onye na-enyocha ngwa ngwa peeji iji chọpụta ma oge ibu nke webụsaịtị gị ruru ihe achọrọ nke igwe ọchụchọ Google. Ọ na-achọpụtapụta mmejọ ga-edozigharị yana mmelite nke enwere ike ịme iji bulie oge Ibu Ibu websaịtị gị.
Mgbe nyocha ahụ gasịrị, ị nweta ọ bụghị naanị akụkọ maka ụdị kọmputa, kamakwa maka ụdị mkpanaka.
Maka nsonaazụ ọ bụla, ị ga-ahụ:
Oge Ibe Peeji: Oge ole ọ ga-ewe ka ibe ahụ wee nwee mmekọrịta zuru oke.
Nyochaa nke ọma: Ọnụọgụ nke audits nke ibe weebụ gị gafere nke ọma.
Njehie imezi: idozi njehie ndị a ga-enyere peeji web gị aka ibue ngwa ngwa
Site na Semalt, ị nwekwara ike ịrịọ maka nyocha n'efu na ịchọpụta otu esi emeziwanye weebụsaịtị gị: